Kootkeet: Dhaabbata oomisha korojoon dubartoota aangeessaa jiru - BBC News Afaan Oromoo
Kootkeet: Dhaabbata oomisha korojoon dubartoota aangeessaa jiru
7 Amajjii 2019
Image copyright Kotket
Kan daldalu bu'aa argachuuf ifaaja. Bu'aan kun yeroo baayyee qarshiin shallagama. Garuu isarra gaafa darbu warreen itti gaafatamummaa hawaasaa fedhiin fudhatan bu'aa isaa qarshiin tilmaamamurra darbuuf kaayyeefatu.
Obbo Addunyaa Caalchisaaan michuu isaanii Daani'el Taaddasaa waliin tahuun dhaabbata korojoo oomishu, 'Kootkeet' jedhamu waggaa sadii dura hundeessan.
Dhaabbata Ameerikaa meeshaalee gogaa Itoophiyaa irraa bitanii gurguran, garuummoo fedhiifi dhiyeessi garaagarummaa guddaa qabu wajjin hojjechuun, yaada isaanii gara gogaarraa korojoo oomishuu akka kakaase dubbatu.
'Kootkeetiin' yeroo jalqaban qabeenya gogaa Itoophiyaa biyya alaatti geessuun faayidaa argachuun dabalata, ''karoorri keenyi inni guddaan dubartootaaf carraa hojii uumuu ture,'' jedhu.
Dubartoota sababii adda addaatiin osoo hinbaratiin hafan
''Dhaabbatichi kan ijaarame harki caalu mataa keenyaaf otoo hin taane hojjettota keenyaafidha,'' jedhan.
Hojjettoonni isaanii qooda (share) bitatanii dhaabbatichi gaafa guddachaa adeemu achumaan akka irraa fayyadaman akeekanii akka jalqaban himu.
Dubartoonni dhaabbatichatti qacaramanii hojjetan harka qalleeyyi barumsaa guddaa kan hin qabne yoo tahaniyyuu dhihoo kana qooda kaampaanii bitachaa jiraachuufi ammaaf garuu nama lamaan gaggeessaa jirra jedhan.
Deeggarsa mootumma irra argataniin dhaabbatni isaanii Finfinnee naannoo Qaallittiitti akka oomishaa jiranis himu. Haa tahu malee invastimantiin akkanaa gama garaagaraan ammas tumsa akka fedhan himu.
Image copyright ADUGNA CHALCHISA
Goodayyaa suuraa ''Fuulduratti oomisha googaan Itoophiyaatti dura bu'uu barbaanna''
Agarsiisa kaayyoo isaanii dubartoota aangoomsuu akka ta'uufis korojoowwan oomishan Siiqqeefi Sabbata faa jedhanii akka moggaasan obbo Addunyaan ni dubbatu.
''Dubartoonni carraa hojii yeroo argatan of danda'u, of aangessu jedhu.
Siiqqeenimmoo akka aadaa Oromootti aangoo dubartii agarsiisa, sabbatnis kan haadholiin mudhii isaanii itti jabeefatani waan ta'eef akka mallattootti fayyadamuu yaalle'' jedhan.
Maqaa hojjettoota isaaniis korojoowwaan akka moggaasaniis dubbataniiru.
''Dubartoonni biyya keenyaa 'dhiiraa olitti' itti gaafatamummaa baatuu, dubartiin mindaa argatti taanaan kan isheerraa eeggatu maatii waan taheef, kanaaf dubartiin tokko Finfinnee keessatti jiraachuuf qarshii hangamtu ishee barbaachisa waan jedhu erga qoranneen booda miindaa kaffallu kaffaluu jalqabne''
Dubartiin dhaabbatummaan dhaabbata isaaniitti qacaramte tokkos harkaan qarshii 5000 akka argattu himan kunimmoo kaffaltii warshaaleen biyya keessaa kaffalan baayyee irraa dachaan akka caalu himu.
Akka idila addunyaatti gabaan meeshaalee gogaa dabalaa jiraachuu himu.
Inumaayyuu fedhiin jiruufi dhiyeessi wal gitaa akka hin taane ni dubbatu.
Teessoo isaanii Magaalaa Barliin, Jarman kan godhatan obbo Addunyaan, gabaa online irratti mallattoo (brand) isaaniin beeksifachuun daldaluu akka jalqaban dubbatan.
Dubartoota Itoophiyaa seenaa addaa galmeessaa jiran
''Dubartoota aangessuun hawaasa rakkina jalaa baasuudha''
''Dhiyeessi keenya gabaa biyya alaa ijaa hin quubsineef hojii beeksisaa ammaaf badaa hojjechaa hin jirru.''
Haa ta'u malee agarsiisawwan faashiniii magaalaalee Awurooppaa kanneen akka Barliiniifi Paarisitti akka hirmaataniifi dhaabota michuu Ameerikaa waliinillee hariiroo daladalaa akka qaban himaniiru.
Yaada warraaqsa hawaasaa
Ammaaf jijjiiramaa guddaa fiduu yoo baanneyyuu gara fuulduraa hojiin keenya hojjettoota wiirtuu kan godhate ijaa taheef, sun Itoophiyaa keessatti baratamaa yoo deeme; dhaabota biroo qaqqabee dhiibbaa yoo fideef keessumaa dubartoonni lafa hojii isaaniitti yeroon itti cunqurfaman yoo hafe, yeroos akka nama hojii uumaafi jijjiiramaa fidaa jirutti of ilaalaa jedhan.
Obbo Addunyaan dhaaba isaaniitti hoggansaa hanga hojjetaatti dubartoota qofa akka qacaran BBCtti himan. Kunimmoo naannoo qoccollaa saalaa irraa bilisa tahe uumuuf haala mijataa akka tahe dubbatan.
Kana malees bakka qulqullina qabuufi yeroo hojii deemaniifi galan kan hin sodaanne taasisuu, haadholii ijoollee qabaniifi hoosisaniifi immoo yeroo hojii gegeeddaramu kennuunfaallee sirna hojii keeessa jiru dha jedhan.
Dhaabbatnisaanii dubartoonni bakkatti isaan qana'ee itti gammadanii hojjetan akka ta'uuf carraaqqii goona guutummaan guutuutti galmaan yoo gahuu baaneyyuu jedhan.
Goodayyaa suuraa Addunyaa Caalchisaa
''Nuti baadiyyaatii baane, jiruufi jireenya uummata keenyaa ni beekna,'' kan jedhan obbo Addunyaan, dhaaboota garaagaraa keessatti qacaramanii yoo hojjetan hojiin hojjetaniifi mindaa kaffalamuuf wal gitaa akka hin turree ni dubbatu.
Kunimmoo namoota isaan amma hojjechiisan waanta isaan keessa darban waan foyya'aa tahe akka barbaadan isaan taasisuu himu.
Kootkeet warshaa gogaa Itoophiyaa keessatti dura bu'uun dhaabota kaanifillee fakkeenyaatti akka tajaajilu mul'ata qabna jedhan.
Dubartoonnii 30 tahan dhaabbata isaanii keessaatti dhaabbatummaan qacaramanii akka dalagan nutti himan.
Viidiyoo Dubartoota sababii adda addaatiin osoo hinbaratiin hafan
Viidiyoo Tuutni poolisii dubartoota qofaa osoo ta'ee dhiironni maal yaadu?